Madaxweyne Farmaajo oo qaabilay wafdiga wasiirka difaaca Turkiga - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG)- Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda dowladda Turkiga oo uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga dalkaas Mudane Halusi Akar.
Safarka wafdigan ka socda dalka Turkiga ay ku yimaadeen Muqdisho ayaa ku saabsanaa sidii dowladda Turkigu u sii dardargelin lahayd taageerada ay u fidiso Soomaaliya iyo inay qiimeeyaan siyaabaha ay ku sii horumarin karaan taageerada Ciidamada Qalabka sida ee dhinacyada tabobarka iyo qalabaynta.
Madaxweynaha iyo wafdiga ka socday dowladda Turkiga ayaa ka wada hadlay dadaallada dowladda Turkiga ee ku aadan tabobaridda Ciidamada Qalabka sida iyo sidii loo dardargelin lahaa dhisidda iyo kobcinta qaybaha kala duwan ee Ciidamada Qaranka, gaar ahaan kuwa Dhulka, Cirka iyo Badda.
Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyey kaalinta muhiimka ah ee ay ka qaadanayso dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka sida, taasi oo asaas u ah in ciidanka Soomaaliyeed ay si buuxda u xaqiijiyaan ammaanka dalka.
Wafdiga dowladda Turkiga ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga Turkiga, waxaana qeyb ka ahaa taliyaha ciidamada Turkiga, Saraakiil sare oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada Turkiga iyo madaxa Hay’adda TIKA ee qaabbilsan arrimaha horumarinta iyo iskaashiga.
Shirkadda Samsung oo soo saareysa taleefan su'aalo badan dhaliyay